Date My Pet » 6 Fanontaniana mpivady Tokony Diniho Alohan'ny hahazo Pet
Sary izany: Ianao hoe efa nahita olona iray manokana, ary ny fifandraisanareo dia mahafinaritra. Fa inona no atao rehefa manoro hevitra hafa manan-danja ny fandraisana ny dingana sy ny fanaovana fanoloran-tena ny tsirairay…amin'ny alalan'ny fahazoana ny biby? Alohan'ny ampiako izany hoe alika na saka vaovao ny fiainantsika, Diniho ny fitandremana ny ireto fanontaniana manaraka ireto ao an-tsaina.
"Moa ve isika te roa ny biby?"
Ny fananana biby eo amin'ny fiainana dia mety ho mahafa-po sy ny fiainana-fanamafisana traikefa. Mety ho lafo sy mandany fotoana, miaraka amin'ny ASPCA estimating ny fitaovana mitovy habe alika mety lany eo ho eo $1,580 isan-taona ho an'ny sakafo, veterinarian fandaniana, sy ny fikarakarana, raha ny saka dia afaka lany eo ho eo $1,035 isan-taona. Ny fanapahan-kevitra mba hahazoana biby tokony ho fifanoloran, ary tokony ho fotoana ela alohan'ny tena manampy ny alika, saka, na biby hafa amin 'ny fiainanao. Ataovy ao an-tsaina ny mety ho manan-danja hafa te hanana biby; raha izany no izy, dia manaja ny heviny ary hevero mitana an-trano eny amin'ny nitondra biby vaovao. Raha toa ka na ny efa manana biby, dia tokony handinika ny zavatra ilain'ny biby, rehefa manapa-kevitra.
"Inona no karazana biby ny tsara ho antsika?"
Raha toa ianao ka mifanitsy amin'ny asabotsy maraina ao amin'ny zaridaina jogs tamin'ny Labrador, fa ny manan-danja hafa no mieritreritra ny nanangona tanky goavana amin'ny trondro, dia mila miresaka momba ny zavatra karazana biby samy te anao. Tafiditra ao amin'io allergies aminareo, na ny manan-danja hafa manana, Tsy ny halehiben'ny toerana velona amin'izao fotoana izao, asa ny fandaharam-potoana, sy ny lafiny ara-bola, rehefa manapa-kevitra eo amin'ny biby. Ampiasao izany mba hiresahana ny fahafahana haben'ny ny biby fiompy tianao, koa. Ny alika lehibe kokoa dia afaka manolotra bebe kokoa noho ny zava-tsarotra sy ny fandaniana kely alika am-pofoany.
"Tena maro ny biby fiompy no tiantsika, ihany?"
Raha mbola manan-danja aminao sy ny hafa mety ho Nanaiky ilay karazana biby tianao, ianao koa dia mila mitovy hevitra momba ny fomba biby fiompy maro tianao. Isaky fanampiny biby, ny andraikitra sy ny vola lany miaraka amin'ny fikarakarana ny biby ihany koa dia hitombo. Ataovy ao an-tsaina misy lalàna sy fitsipika izay voalaza eo amin'ny amin 'ny isan biby ahafahanao manana, indrindra fa raha ianao amin'ny fanofana.
"Aiza ho velona ny biby fiompy?"
Ho an'ny mpivady sasany, miara-mipetraka Tsy safidy noho ny antony maro. Raha toa ka manan-danja ianao sy ny hafa dia tsy miara-mipetraka, dia mila manapa-kevitra izay Fluffy Fido na ho velona. Ohatra, dia manapa-kevitra ny hitandrina ny biby ao an-tranon'ny namanao mandritra ny herinandro, raha mbola manana ny biby fiompy ny faran'ny herinandro? Rehefa manapa-kevitra momba ny fandaharana, lafin-javatra eo amin'ny asa sy ny amin'izao fotoana izao ny fandaharam-trano na trano.
"Iza no tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana biby?"
Raha sy ny manan-danja hafa nahazatra nisara fandaniana, dia manapa-kevitra izay no tompon'andraikitra amin'ny fikarakarana biby mety ho moot. Na izany aza, raha tsy mitovy ny anjaran'ny tsirairay foana nisara fandaniana, na raha toa ka misy aminareo manao zavatra mihoatra lavitra noho ny hafa, fanapahan-kevitra izay tokony handoa ny faktiora fitsaboina momba ny biby sy ny biby resaka sakafo dia tokony hanana amin'ny hafa manan-danja eo anatrehanao hitondra saka vaovao an-trano na ny alika.
"Aiza no ahitana ny biby?"
Ianao sy ny namanao mety ho nanaiky amin'ny fahazoana iray karazana biby manokana. Fa aiza no hahita ny alika vaovao, saka, na hamster? Angamba misy aminareo manana fihetseham-po mahery momba ny biby fiompy novidina avy fivarotana iray na mpiompy. Raha izany no mitranga, ianao tokony ho roa tao an-tsambo, ary manaiky momba any amin'izay hahitanareo biby.
Ny fananana misokatra amin'ny fifanakalozan-kevitra manan-danja momba ny karazana hafa sy ny biby maro dia dingana manan-danja eo amin'ny fifandraisanareo. Tsarovy ny ho marin-toetra sy hanome lanja ny hevitry ny tsirairay.